Ndosiya Chikoro Here? | Vari Kuyaruka
Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kiluba Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ndosiya Chikoro Here?
Unofanira kufunga nezveizvi
Munyika yaunogara munhu wose anotarisirwa kunge akadzidza kusvika papi? Iwe wati wasvika here ipapo? Kana ukasiyira chikoro panzira unenge usiri kuteerera murayiro uri muBhaibheri unoti zviisei “ pasi pevanhu vane masimba makuru. ”—VaRoma 13:1.
Watozadzisa here zvinangwa zvako pakudzidza? Unoda kuti kudzidza kukubatsire kuzadzisa zvinangwa zvipi muupenyu? Unonyatsoziva here? Unofanira kunge uchiziva! Nokuti kana ukasadaro unopedzisira wafanana nomunhu anokwira chitima asi asingazivi kwaari kuenda. Saka gara pasi nevabereki vako mokurukura chikamu chiri pazasi apa chakanzi “ Zvinangwa Zvangu Pakudzidza.” Hakusi kuchenjera kusiyira chikoro panzira.
Kusiyira chikoro panzira kwakafanana nokujamba muchitima usati wasvika kwauri kuenda
Chii chiri kuita kuti ufunge kusiya chikoro? Dzimwe nguva uri kuda kushanda kuti ubatsire mhuri yako kuti muwane chokurarama kana kuti uri kuda kuita basa rokuzvipira uchibatsira vamwe vanhu. Zvimwe zvikonzero zvisina musoro ndezvokuti uri kuomerwa nechikoro kana kuti haufariri kuita basa raunopiwa kuchikoro. Pane nyaya ndepokuti unyatsoona kuti chikonzero chacho chine musoro here kana kuti hachina musoro. Kana ukasiya chikoro nechikonzero chisina musoro chokwadi unozochema mangwana.
Kusiyira chikoro panzira kwakafanana nokujamba chitima chichifamba iwe usati wasvika kwauri kuenda. Kugara muchitima kungasanakidza, vanhu varimo vanenge vachiita zvinhu zvisinganakidzi asi kana ukajamba muchitima uchakuvara zvakaipisisa uye hausviki kwauri kuenda. Ndizvowo zvakafanana nokusiyira chikoro panzira. Kazhinji kacho zvinokuomera kuti uwane basa. Kana ukariwana, rinenge risingabhadhari mari yawaizowana dai kuri kuti wakapedza chikoro.
Panzvimbo pokusiyira chikoro panzira, shingirira matambudziko aunosangana nawo kuchikoro. Kuita izvozvo kuchaita kuti uve munhu anotsungirira uye uchakwanisa kuzokunda matambudziko anosanganikwa nawo mumabasa.
Zvinangwa Zvangu Pakudzidza
Chinangwa chokuenda kuchikoro ndechokuti uzokwanisa kuwana basa richaita kuti urarame uye kuzotarisira mhuri yako kana wava nemhuri. (2 VaTesaronika 3:10, 12) Wati wasarudza here basa raunoda kuzoita uye kuti ungashandisa sei nguva yaunenge uri kuchikoro kugadzirira kuti uzoita basa iroro? Kuti uone kuti zvauri kuita kuchikoro uri mugwara rakanaka, pindura mibvunzo inotevera:
Ndezvipi zvandinogona? (Somuenzaniso, unopindirana nevanhu here? Unonakidzwa nokushandisa maoko ako here pakuita mabasa akadai sekugadzira zvinhu zvinenge zvafa kana kuti zvimwewo? Unogona kuona dambudziko worigadzirisa here?)
Mabasa api angada kuti ndishandise matarenda andinawo?
Mabasa api anowanikwa kwandinogara?
Masubject api andiri kuita kuchikoro achazondibatsira kuzoita basa randiri kuda?
Ndezvipi zvimwe zvandingaita iye zvino zvingazondibatsira kuti ndizoita basa randiri kuda?
Yeuka kuti chinangwa chako ndechokuti paunopedza chikoro ukwanise kuita chimwe chinhu muupenyu nedzidzo yawakawana. Saka usazova munhu anongodzidza nakudzidza zvisingaperi uchitiza kuita mabasa anoitwa nomunhu mukuru.
Mibvunzo Inobvunza Vechiduku, Bhuku 1
Dzimwe dzenyaya dzinotaurwa mubhuku iri ndedzekunwa doro uye kushandisa madhiragi, kuzvibata panyaya dzebonde, kupfimbana uye kudanana.
Iva Nezvinangwa Zvinokudza Mwari
MIBVUNZO YAKAWANDA INOBVUNZWA NEVECHIDIKI...
Ko Kana Ndichimanikidzwa Kuita Bonde?
Ndiri Mukomana Asi Ndinonzwa Ndichida Vakomana—Zvinoreva Here Kuti Ndiri Ngochani?
Ndingaita Sei Kuti Ndisaramba Ndichifunga Nezvebonde?
Ndoita Sei Kana Ndisingachakwanisi Kurega Kuona Zvinonyadzisira?
Wagadzirira Kufambidzana Nomumwe Munhu Here?
Wagadzirira Here Kuroora Kana Kuroorwa?
Unoziva Sei Kuti Munhu Uyu Ndiye Wako?
Munofanira Kurambana Here?—Chikamu 1
Tinofanira Kurambana Here? (Chikamu 2)
Zvii Zvandinofanira Kuziva Nezvekutumira Mameseji Anonyadzisira?
Ndingatsanangurira Sei Vamwe Zvandinotenda Panyaya Dzebonde?
Kuona Zvinonyadzisira Kwakaipirei?
Kushungurudzwa Panyaya Dzepabonde—Chikamu 1: Ungaitei Kuti Usashungurudzwa?
Kushungurudzwa Panyaya Dzepabonde​—Chikamu 2: Ungaitei Kana Wakamboshungurudzwa?
Kuita Bonde Nemumuromo Kunganzi Kuita Bonde Here?
Kuita Chitsidzo Chokusaita Zvepabonde Usati Waroora Kana Kuroorwa Kunobatsira Here?
Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 1: Zvandiri kuona ndizvo here?
Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 2: Zvandiri Kuita Zvinoita Kuti Afungei?
Ungochani Hwakaipa Here?
Kutamba Nemwoyo Wemunhu Kwakaipa Here?
Ndingaita Sei Kuti Ndinzwe Zviri Nani Kana Ndarambana Nemumwe Munhu?
Ndoita Sei Kana Ndichisurukirwa?
Ko Kana Ndisingakwani Pachikwata Chacho?
Zvii Zvaunofanira Kuziva Nezvokutumira Mameseji?
Ndodii Kana Vanhu Vachindinyeya?
Nei Ndisina Shamwari?
Ndinofanira Kuwedzera Shamwari Dzangu Here?
Chii Chandinofanira Kuziva Nezvekuisa Mapikicha paSocial Network?
Ndingaita Sei Kana Shamwari Yangu Ikandirwadzisa?
Ndingakunda Sei Miedzo?
Ndingaita Sei Kana Vabereki Vangu Vava Kuda Kurambana?
Nei Vabereki Vangu Vasingandipiwo Nguva Yokumbofara?
Unofanira Kuona Sei Mitemo Yevabereki Vako?
Unofanira Kuita Sei Kana Watyora Mutemo Wevabereki
Ndingaita Sei Kuti Nditsungirire Matambudziko Angu?
Pamba Panombofanira Kuva Nemitemo Here?
Nei Ndichifanira Kuita Kuti Tiwirirane Nevana Vemumba Medu?
Ko Kana Mubereki Wangu Achirwara?
Ndingaita Sei Kuti Ndisaongororwa Zvese Zvese Zvandinoita?
Ndava Kukwanisa Kugara Ndega Here?
Ndingaita Sei Kuti Vabereki Vangu Vavimbe Neni?
Ndingataura Sei Nevabereki Vangu Nezvemitemo Yavanondipa?
Ko Kana Chikoro Chichindiomera?
Ndingaita Sei Kuti Ndipase?
Rinopera Here Basa Iri?
Mudzidzisi Wangu Haandifariri
Ungaitei Kana Uchishungurudzwa?
Takasikwa naMwari Here Kana Kuti Takabva Kumhuka?—Chikamu 1: Sei Tichiti Mwari Ariko?
Takasikwa naMwari Here Kana Kuti Takabva Kumhuka?—Chikamu 2: Nei Tichiti Hatina Kubva Kumhuka?
Takasikwa naMwari Here Kana Kuti Takabva Kumhuka?​—Chikamu 3: Nei Kubvuma Kuti Zvinhu Zvakasikwa Kuine Musoro?
Takasikwa naMwari Here Kana Kuti Takabva Kumhuka?​—Chikamu 4: Ndingatsanangura Sei Kuti Zvinhu Zvakaita Zvokusikwa?
Ndoita Sei Kana Ndichishungurudzwa Nevamwe Paindaneti?
Kukura Mune Zvekunamata
Nei Ndichifanira Kunyengetera?
Nei Tichipinda Misangano paImba yeUmambo?
Bhaibheri Ringandibatsira Sei?—Chikamu 1: Kudzidza Bhaibheri
Bhaibheri Ringandibatsira Sei?—Chikamu 2: Nakidzwa Nekuverenga Bhaibheri
Ndingaita Sei Kuti Ndidzikire Muviri?
Ungaitei Kana Uchirwara?—Chikamu 1
Ungaitei Kana Uchirwara?—Chikamu 2
Ndingaitei Kuti Ndirege Kunyanya Kusuruvara?
Ndingaitei Kana Ndichirwara? (Chikamu 3)
Ndingaita Sei Kana Ndikaona Kuti Ndava Kutanga Kuyaruka?
Ndingaita Sei Kana Ndiine Depression?
Ndingaita Sei Kuti Ndidzore Manzwiro Andinoita?
Ndingaita Sei Kuti Ndisarukutika?
Ndingaita Sei Kuti Ndiwane Nguva Yakakwana Yekurara?
Chii Chingandipa Shungu Dzekuekisesaiza?
Ungaita Sei Kuti Usaverengera Kuita Zvinhu?
Uri Kunetseka Nezvakaita Muviri Wako Here?
Ndiri Munhu Anovimbwa Naye Here?
Nei Ndichifanira Kubatsira Vamwe?
Ndingaita Sei Kana Pane Zvandakanganisa?
Kuva Munhu Ane Tsika Kune Basa Here?
Kutevedzera Vanhu vomuTV Kwakaipirei?​—Chikamu 1: Nyaya Iyi Yakanangana Nevasikana
Kutevedzera Vanhu vomuTV Kwakaipirei?​—Chikamu 2: Nyaya Iyi Yakanangana Nevakomana
Ndingadzora Sei Hasha Dzangu?
Zvine Basa Here Kutaura Mashoko Akaora?
Nei Ndichifanira Kuva Munhu Akatendeseka?
Ndinofanira Kuiswa Tattoo Here?
Zvii Zvandinofanira Kuziva Panyaya Yekunwa Doro?
Kudzidza Mumwe Mutauro Kwakanakirei?
Ndinozviona Semunhu Asingakanganisi Here?
Ndivanaani Vanoita Zvakanaka Vandinoda Kutevedzera?
Ndingaita Sei Kuti Ndishandise Mari Yangu Zvakanaka?
Ndodii Kana Ndakabhowekana?
Ndingashandisa Sei Nguva Yangu Zvakanaka?
Nei Ndichingogara Ndichirasika Pakutaura?
Zvii Zvandinofanira Kuziva nezvemaVideo Game?
Zvine Basa Here Kuti Ndinoteerera Nziyo Dzakaita Sei?
Zvii Zvandinofanira Kuziva Panyaya Dzemitambo?
Pane Chakaipa Here Nekuvaraidzwa Nezvinhu Zvemidzimu?